Waa maxay tamar-dhuleedka, nidaamyada qaboojiyaha iyo mustaqbalka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Daniel Palomino | | Tamar-dhuleedka
Xaqiiqdii waad ogtahay waxa tamar-dhuleedka guud ahaan guud ahaan, laakiin Miyaad taqaanaa dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah tamartaan?
Si guud ahaan waxaan u nidhaahnaa tamar-dhuleedka ayaa ah tamarta kuleylka ah ee ka soo baxda gudaha dhulka.
Si kale haddii loo dhigo, tamar-dhuleedka ayaa ah ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee aan ka soo bixin Qorraxda.
Intaa waxaa dheer, waxaan dhihi karnaa in tamartani aysan aheyn tamar la cusboonaysiin karo sida tan, tan iyo cusboonaysiinteeda ma aha mid aan xad lahayn, Si kastaba ha noqotee lama qiyaasi karo miisaanka aadanaha, sidaas darteed waxaa loo tixgeliyaa dib-u-cusbooneysiin ujeedooyin wax ku ool ah.
1 Asalka kuleylka gudaha dhulka
2 Isticmaalka tamar-dhuleedka
2.1 Kaydadka heerkulka sare
2.2 Kaydadka heerkulka hooseeya
2.3 Kaydadka dhagaxa kulul ee qalalan
3 Tamar heer kul aad u hooseeya
3.1 Bamka kuleylka
3.2 Wareeg wareegyo leh Dhulka
3.2.1 Isweydaarsiga kuleylka leh biyaha dusha sare
3.2.2 Ku beddel dhulka
3.3 Wareegyo ku wareeji guriga
4 Waxqabadka nidaamyada qaboojiyaha
5 Qaybinta tamarta dhulka hoostiisa ah
6 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada tamar-dhuleedka
7 Mustaqbalka tamarta dhulka
Asalka kuleylka gudaha dhulka
Sababta ugu weyn ee keena kuleylka gudaha Dunida waa qudhun joogto ah ee walxaha shucaaca qaarkood sida Uranium 238, Thorium 232 iyo Potassium 40.
Mid kale oo ka mid ah asalka tamarta dhulka hoostiisa waa kuwa shilalka taarikada tektikada.
Gobollada qaarkood, si kastaba ha noqotee, kuleylka kuleylka ayaa aad u urursan, sida ku dhacda agagaaraha volcanoes, magma curiyaha, geysers iyo ilo kulul.
Tamartaan waxaa la isticmaali jiray ugu yaraan 2.000 oo sano.
Roomaaniyiintu waxay u isticmaali jireen ilo biyo kulul musqulaha iyo, dhawaanahan, tamartaan ayaa loo isticmaalay tan kululaynta dhismooyinka iyo guryaha lagu koriyo iyo dhalinta korantada.
Waqtigaan la joogo waxaa jira 3 nooc oo dhigaal ah oo aan ka heli karno tamar-dhuleedka:
Kaydadka heerkulka sare
Kaydadka heerkulka hooseeya
Kaydadka dhagaxa kulul ee qalalan
Waxaan leenahay waxaa jira deebaaji ah heerkul sare marka biyaha kaydku gaadho heerkulka ka sarreeya 100ºC joogitaanka il kuleyl firfircoon.
Si kuleylka dhulka hoostiisa ah ay u abuurto tamar-dhuleedka dhulka hoostiisa lagu isticmaali karo, xaaladaha juquraafiyeed waa inay suurtagal ka dhigaan sameynta a kayd biyo-dhuleedka, oo la mid ah kuwa ku jira saliida ama gaaska dabiiciga ah, oo ka kooban a dhagaxa la marin karo, dhagxaanta ciidda ama nuuradda tusaale ahaan, oo ay kor u kacdo a lakabka biyuhu xiraan, sida dhoobada oo kale.
Biyaha dhulka hoostiisa mara ee ay kululeeyaan dhagaxyada waxay u gudbaan jihada kore kaydka, halkaas oo ay weli ku xayiran yihiin lakabka aan la mari karin.
Goorma dillaacyo ayaa jira lakabka lakulmaynin, uumiga uumi baxsiga ama biyaha dusha sare waa macquul, oo u muuqda qaab biyo kulul ama geys.
Ilo-biyoodka kulul waxaa loo isticmaali jiray ilaa waqtiyadii hore si fudud ayaa loogu isticmaali karaa kululaynta iyo howlaha warshadaha.
Qubeyska Roman ee Qubeyska
Kaydadka heerkulka hoose waa kuwa ku jira heerkulka biyaha, oo aan isticmaali doonno, ayaa ku yaal inta udhaxeysa 60 iyo 100ºC.
Meelahan lacag dhigashada ah, qiimaha qulqulka kuleylka waa qiimaha caadiga ah ee qolofka dhulka, sidaas darteed jiritaanka 2 ee xaaladihii hore waa mid aan loo baahnayn: jiritaanka ilo kuleyl firfircoon iyo go'doominta dukaanka dareeraha.
Kaliya jiritaanka bakhaar qoto dheer oo ku habboon si markaa, iyada oo loo yaqaan 'gradient' heer-kuleedka jira ee aaggaas la sheegay, waxaa jira heerkul ka dhigaya ka-faa'iideysigiisa mid dhaqaale.
Awoodda of tamar-dhuleedka es badan weyn haddii kuleylka laga soo saaro dhagaxyada kulul ee qallalan, oo aan dabiici ahaan biyo ku jirin.
Waxay joogaan a heerkulka u dhexeeya 250 iyo 300ºC horeba mid qoto dheer inta u dhexeysa 2.000 iyo 3.000 mitir.
Ka faa'iidaysigeeda waa lagama maarmaan in la jebiyo dhagaxyada kulul ee qallalan, si ka dhig suuf.
Kadib biyo qabow ayaa la soo saaray dusha sare ee tuubbo, oo u oggolaanaysa inuu dhex maro dhagaxa jaban ee dillaacay, si ay u kululaato ka dibna, uumiga biyaha ayaa la soo saaraa iyada oo loo sii marinayo tuubbo kale si loogu isticmaalo cadaadiskeeda in lagu wado marawaxadaha iyo dhalin tamar koronto.
Dhibaatada ka haysata dhiig-miirashada noocan ahi waa farsamooyinka lagu jajabiyo dhagxaanta qoto dheer iyo qodista.
In kasta oo horumar badan laga gaadhay aagaggan iyadoo la adeegsanayo farsamooyin qodista saliidda.
Tamar heer kul aad u hooseeya
Waan tixgelin karnaa dhulka hoostiisa gunta yar yar sida a isha kuleylka ee 15ºC, gebi ahaanba la cusboonaysiin karo oo aan la koobi karin.
Iyada oo la adeegsanayo nidaam qabasho habboon iyo mashiinka kuleylka, kuleylka waxaa laga wareejin karaa meeshan 15ºC loona wareejinayaa nidaam gaaraya 50ºC, kan dambena loo isticmaalo kuleylinta iyo helitaanka biyo kulul oo nadaafad leh oo loogu isticmaalo guriga.
Sidoo kale, isla bamka kuleylka ayaa ka soo jiidan kara kuleylka deegaanka 40ºC wuxuuna u geyn karaa dhulka hoostiisa isla nidaamka qabashadaSidaa darteed, nidaamka xallin kara kuleylka guriga sidoo kale wuxuu xallin karaa qaboojinta, taasi waa, gurigu wuxuu leeyahay hal rakib oo loogu talagalay qaboojiyaha muhiimka ah.
Cillada ugu weyn ee noocan ah tamarta ayaa ah waxay ubaahan yihiin sagxad aad u ballaaran oo wareega wareega ahSi kastaba ha noqotee, faa'iidadeeda ugu weyni waa pSuurtagalnimada in loo isticmaalo sidii kuleyliyaha iyo nidaamka qaboojinta qiime aad u jaban.
Jaantuska soo socda waxaad ku arki kartaa qaabab kala duwan oo qabashada ama wareejinta kuleylka dhulka si loogu isticmaalo hadhow kuleylka, qaboojinta iyo helitaanka DHW (biyo nadiif ah oo nadiif ah). Nidaamka hoos ayaan ku sharaxi doonaa.
Qaboojiyaha guri, guri dabaqyo ah, isbitaal, iwm. waa la gaari karaa shaqsi ahaan, Maaddaama aysan u baahnayn maalgashi ballaaran oo nidaamka ah, oo ka duwan tas-hiilaadka heer kul iyo heer-kul dhexe ee heer-kuleedka
Nidaamkan loogu talagalay ka faa'iideysiga tamarta qorraxda ee uu nuugo dhulka dushiisa wuxuu ku saleysan yahay 3 cunsur oo waaweyn:
Wareejinta wareegga leh Earth
Isweydaarsiga kuleylka leh biyaha dusha sare
Ku beddel dhulka
Wareeg ku wareeji guriga
Mashiinka kuleylka waa mashiinka kuleylka leh kaas oo ku saleysan wareegga 'Carnot Cycle' ee uu sameeyo gaas.
Mashiinkaani wuxuu kaqaadaa kuleylka hal ilo si uu ugu gaarsiiyo mid kale oo heerkulkiisu sareeyo.
Tusaalaha ugu caansan waa qaboojiyeyaashaKuwani waxay leeyihiin mashiin ka soo saara kuleylka gudaha una erya dibadda, taas oo heer kulka sare ku jirta.
Tusaalooyinka kale ee matoorrada kuleylka waa hawo qaboojiyeyaal iyo hawo qaboojiyeyaal loogu talagalay guryaha iyo gawaarida.
Qorshahan, waxaad ku arki kartaa taas Nalka qabow wuxuu kaqaadaa kuleylka dhulka isdhaafsiga iyo dareeraha ku wareega wareegga guluubka qabow wuxuu qaataa kuleylka ilaa uu uumi baxo.
Wareegga biyaha ku qaada kuleylka dhulka ayaa qabooba oo ku soo noqda dhulka, soo kabashada heerkulka ciidda waa mid aad u dhakhso badan.
Dhinaca kale, guluubka kulul, guriga gudihiisa, wuxuu kululaa hawo siinta kuleyl.
Mashiinka kuleylka ayaa "ka" shidmaya kuleylka guluubka qabow illaa guluubka kulul.
Waxqabadka (tamar la siiyay / tamar la nuugay) waxay kuxirantahay heerkulka isha keena kuleylka uumi baxa.
Nidaamyada qaboojinta caadiga ah ka dhuuqo kuleylka jawiga, kaasoo xilliga qaboobaha gaari kara heerkulkas hoose -2 ° C.
Heerkulkaas uumi-baxayaasha uumi-qabte ahaan ma qabsan karo kuleyl iyo Waxqabadka mashiinka ayaa aad u hooseeya.
Xilliga xagaaga markay kululaato, mashiinku waa inuu ka joojiyaa kuleylka jawiga laga yaabo inuu ku jiro 40ºC, waxa leh waxqabadka uma fiicna sida aad filan karto.
Si kastaba ha ahaatee, nidaamka biyo qabatinka dhulka, adoo helaya ilo heerkulka joogtada ah, waxqabadka had iyo jeer waa fiicnayn iyadoon loo eegin xaaladaha heerkulka hawada. Marka nidaamkani waa mid aad uga waxtar badan kan bamka kuleylka caadiga ah.
Wareeg wareegyo leh Dhulka
Nidaamkani wuxuu ku dhisan yahay biyo geli kululaynta kuleylka ka imanaya meel dusha sare leh uumiga / kondenser, sida waafaqsan baahiyaha, nuugista ama kuleylka u wareejinta biyaha la sheegay.
Faa'iidada: hadiyaduhu waa inay leeyihiin a qiimo jaban
Dib udhac: had iyo jeer ma jiro ilo biyo ah oo la heli karo.
Este toos u noqon karaa marka isweydaarsiga u dhexeeya dhulka iyo uumiyaha / hawo-qaadaha kuleylka kuleylka la fulinayo iyadoo la adeegsanayo tuubbo naxaas ah oo duugan.
Guri ahaan, inta u dhexeysa 100 illaa 150 mitir oo beeb ah ayaa loo baahan karaa.
Faa'iidooyinka: qiimo jaban, fudeyd iyo waxqabad wanaagsan.
Dib udhacyada: suurtagalnimada gaas soo daadanaya iyo qaboojinta aagagga dhulka.
Ama sidoo kale waxay noqon kartaa wareegga caawiyaha markay haysato tuubooyin aasan, oo biyo lagu dhex wareejiyo, taas oo iyaduna kuleylka ku beddelato uumi-bixiyaha / kondenser.
Guri ahaan, inta u dhexeysa 100 illaa 200 mitir oo beeb ah ayaa loo baahan karaa.
Faa'iidooyinka: cadaadiska hoose ee wareegga, sidaas awgeedna looga fogaado kala duwanaanshaha heerkulka waaweyn
Dib udhacyada: kharash badan.
Wareegyo ku wareeji guriga
Wareegyadan la socon karaa isweydaarsi toos ah ama qaybinta biyo kulul iyo qabow.
Isdhaafsiga tooska ah Waxay ku saleysan tahay qulqulka qulqulka hawada dusha sare ee uumi-hayaha / hawo-mareenka dhinaca guriga ee isweydaarsiga kuleylka iyo u qaybinta hawo kulul / qabow guriga oo dhan, iyada oo loo sii marinayo tuubooyinka kuleylka kululeeya.
Iyadoo la adeegsanayo hal nidaam oo wax lagu qaybiyo, qaybinta dhaxanta iyo kuleylka guriga ayaa lagu xalliyaa.
Faa'iidooyinka: badanaa waa qiimo jaban oo aad u fudud.
Dib udhacyada: waxqabadka hooseeya, raaxada dhexdhexaadka ah waxaana kaliya lagu dabaqi karaa guryaha cusub ee la dhisay ama leh hawo kululaynta hawada.
Nidaamka qaybinta biyaha kulul iyo qabow waxay salka ku haysaa wareejinta qulqulka biyaha dusha sare ee uumiyaha / hawo-mareenka dhinaca guriga ee kuleylka is weydaarsiga.
Biyaha badanaa waxaa la qaboojiyaa 10ºC xagaaga waxaana loo kululeeyaa 45ºC xilliga jiilaalka si loogu isticmaalo hawo qaboojiye.
Kulaylka dhulka hoostiisa ah waa habka ugu waxqabadka fiican uguna raaxada badan si loo xaliyo kuleylka, si kastaba ha noqotee, looma isticmaali karo qaboojinta, markaa haddii habkan ama kan radiators-ka biyaha kulul loo isticmaalo, nidaam kale ayaa la rakibayaa si loo isticmaalo qaboojinta.
Faa'iidooyinka: raaxo iyo waxqabad aad u sareeya.
Waxqabadka nidaamyada qaboojiyaha
Waxtarka tamarta ee nidaamka qaboojiyaha iyadoo la adeegsanayo ilo kuleyl carrada hoose ee 15ºC waa ugu yaraan 400% kuleylka iyo 500% qaboojinta.
Markay kululaato waxaa jira kaliya tabaruc tamarta korantada ah 25% wadarta tamarta loo baahan yahay. Oo markii loo isticmaalo in lagu qaboojiyo waxqabadka waa ka badan yahay labanlaab ah mashiinka kuleylka ah isweydaarsiga hawada at 40 digrii, sidaa darteed kiiskan sidoo kale waxaa jira a keydinta tamarta oo ka badan 50% marka la barbar dhigo qaboojiye caadi ah.
Tan macnaheedu waxa weeye in laga soo qaado tiirarka qabow illaa tiirarka kulul 4 unug oo tamar ah (tusaale ahaan 4 kalori), waxaa loo baahan yahay oo keliya 1 unug oo tamar ah.
Qaboojiyaha, 5tii cutub ee kasta oo la tuuro, 1 unug ayaa loo baahan yahay si loo bamgareeyo.
Tani waa macquul tan iyo ma dhaliyo kuleylka oo dhan, laakiin badiyaa waxaa laga soo wareejiyaa hal il oo kale.
Unugyada tamarta ee aan siinayno kuleylka kuleylka waa qaab tamar koronto ah, sidaas darteed asal ahaan waxaan soo saarnaa CO2 warshad soo saareysa tamarta korantada, in kasta oo ay aad u tiro yar tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan isticmaali karnaa matoorrada kuleylka oo aan ahayn koronto, laakiin isha ay ka helaan tamarta waxay ahayd kuleylka qoraxda laakiin wali waxay ku jiraan marxalad tijaabo ah.
Si waxaan isbarbardhigeynaa nidaamkan nidaamka kuleylka qabashada tamarta qorraxda iyada oo loo marayo darfaha waxaan ku arki karnaa taas waxay soo bandhigeysaa faa'iido weyn, tan iyo uma baahna urursadayaal waaweyn si loo magdhabo saacadaha la'aanta shucaaca qoraxda.
Isku soo wada duuboo weynuhu waa cufnaanta dhulka taasi waxay inaga dhigeysaa inaan helno ilo tamar ah oo heer kulka joogtada ah leh, taas oo baaxadda codsigan u dhaqanta sida aan dhammaadka lahayn.
Si kastaba ha noqotee, midka sameeya Xulashada ugu fiican ee loo isticmaali karo ilaha tamarta ayaa ah in lagu daro tamarta kuleylka ee kuleylka., in aan la dhaqaajin mashiinka kuleylka sida kor ku xusan (kaas oo sidoo kale) laakiin in lagu daro kuleylka nidaamka, marka la eego kuleylka iyo codsiyada wax soo saarka biyaha kulul, biyaha waa la keeni karaa ilaa 15ºC iyadoo la isticmaalayo tamar-dhuleedka goor dambe, kor u qaad heerkulka biyaha tamarta qoraxda.
Xaaladdan oo kale waxtarka bamka kuleylka ayaa si xad dhaaf ah u kordha.
Qaybinta tamarta dhulka hoostiisa ah
Tamar-dhuleedka ayaa ku baahsan meeraha oo dhan, gaar ahaan qaabka dhagxaanta kulul ee qallalan, laakiin waxaa jira aagag ay ku fidsan tahay in ka badan 10% dusha meeraha waxayna leeyihiin shuruudo gaar ah si ay u horumariyaan tamarta noocan ah.
Waxaan ula jeedaa aagagga taas oo waxay muujineysaa saameynta dhul gariirka iyo fulkaanaha iyo in, guud ahaan, ku beegan tahay cilladaha tectonic muhiim ah.
Waxaana ka mid ah:
Xeebta Baasifigga ee Qaaradda Mareykanka, laga bilaabo Alaska ilaa Chile.
Galbeedka Baasifigga, laga bilaabo New Zealand, iyada oo loo sii marayo Filibiin iyo Indonesia, ilaa koonfurta Shiinaha iyo Japan.
Dooxada kala daadinta ee Kenya, Uganda, Zaire iyo Ethiopia.
Hareeraha badda Mediterranean.
Tamartaan, sida wax kasta oo jira, waxay leedahay qeybaheeda wanaagsan iyo sidoo kale qeybaheeda xun.
Como faa'iidooyinka waxaan dhihi karnaa:
Waa la helay loo qaybiyey meeraha oo dhan.
Ilaha ugu badan ee dhaqaalaha dhulka ayaa ku jira meelaha folkaanaha ku yaal inta badan waddamada soo koraya, taas oo noqon karta mid aad u badan faa iido u leh hagaajinta xaaladaada.
Waa a tamar aan la koobi karin miisaanka aadanaha.
Ma tahay tamarta ka raqiisan taas waa la ogyahay.
Sus faa'iido daro taa lidkeeda waa:
Isticmaalka tamar-dhuleedka ayaa soo bandhigaya qaar dhibaatooyinka deegaanka, gaar ahaan, ah sii deynta gaaska sulphurous jawiga, oo ay weheliso biyaha kulul ayaa laga sii daayaa webiyada, taas oo badanaa ku jirta heer adag oo adag.
In kasta oo guud ahaan, biyaha wasakhda ah dib loogu celin karo dhulka, ka dib marka la soo saaro, xaaladaha qaarkood, cusbada potassium ee ganacsi ahaan loo isticmaali karo.
Guud ahaan, gudbinta kuleylka dhulka hoostiisa masaafada dheer macquul ma aha. Biyaha kulul ama uumiga waa in loo isticmaalaa agagaarka meesha uu ka yimid, ka hor inta uusan qaboojin.
Inta badan biyaha juquraafi ayaa la helaa heerkulka ka hooseeya 150ºC marka guud ahaan, ma ahan kuleylka kuleylka dhalinta.
Biyahaas waxaa loo isticmaali karaa oo keliya qubayska, kuleylinta dhismayaasha iyo guryaha lagu koriyo iyo dalagyada banaanka, ama sidii biyo kululayn ah oo loogu talagalay kululeeyaha.
ka barkadaha dhagaxa kulul ee qallalan way yar yihiinMaaddaama oogada dillaacsan si deg deg ah u qaboojiso, waxtarkooda tamarta ayaa si dhakhso leh hoos ugu dhacaya.
ka Kharashka rakibidda ayaa aad u sarreeya.
Mustaqbalka tamarta dhulka
Ilaa hadda, kaliya daloola iyo soo saar kuleylka illaa moolka 3 km, inkasta oo la filayo inay awood u yeelato inay gaadho moolka dheer, kaas oo tamarta dhulka hoostiisa ah si aad ah loogu isticmaali karo.
Wadarta tamarta la heli karojidka biyaha kulul, uumiga ama dhagaxyada kulul, ilaa qoto dheer 10 km, habab 3.1017 teb. 30 milyan oo jeer isticmaalka tamarta adduunka ee hadda jira. Taas oo tilmaamaysa taas tamar-dhuleedka waxay noqon kartaa beddel xiiso leh muddada-gaaban.
Farsamooyinka la dhameystiray ee horumarinta kheyraadka dhulka hoostiisa ku jira ayaa aad ugu eg kuwa loo isticmaalo qeybta saliidda. Si kastaba ha noqotee, tan iyo heerka tamarta ee biyaha 300ºC ayaa kun jeer ka hooseeya tan saliida, caasimada waxaa lagu maalgelin karaa dhaqaale ahaan sahaminta iyo qodista ayaa aad uga yar.
Si kastaba ha noqotee, shidaal yaraanta ayaa sii hurin karta isticmaalka sii kordhaya ee tamar-dhuleedka.
Dhinaca kale, marwalba way suurtagal ahayd adeegsiga ilo biyo-dhuleedka dhalinta korantada ee matoorro-dhexdhexaad-dhexdhexaad ah (10-100MW) oo ku dhow meelaha ceelasha, laakiin heerkulka ugu hooseeya ee heer-kuleed ee la isticmaali karo ee dhalinta korontadu wuxuu ahaa 150ºC.
Dhawaan marawaxado aan bir lahayn ayaa loo soo saaray biyo-dhuleedka iyo uumi ilaa 100ºC kaliya, taas oo u oggolaaneysa in la ballaariyo berrinka isticmaalka tamartaan.
Sidoo kale, waxaa loo isticmaali karaa howlaha warshadaha sida ka shaqeynta biraha, kululaynta howlaha warshadaha noocyadooda kala duwan, kululaynta guryaha lagu koriyo, iwm.
Laakiin malaha mustaqbalka ugu weyn ee tamar-dhuleedka ayaa ku jira ka faa'iideysiga tamar-dhuleedka aadka u hooseeya, iyadoo ay ugu wacan tahay kala duwanaansho, fudeyd, kharash yar iyo dhaqaale deegaanka iyo suurtagalnimada u isticmaal sida kuleylka iyo nidaamka qaboojinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamar-dhuleedka » Waa maxay tamar-dhuleedka, nidaamyada qaboojiyaha iyo mustaqbalka